Biomechanical tattoos, hafu nyama hafu muchina | Kunyora
Biomechanical nyora, hafu yenyama hafu muchina
ari ma tatoo Biomechanics rudzi rutsva rweinki hunyanzvi hwakafemerwa neazvino zvigadzirwa zvehunyanzvi, fungidziro nesainzi fungidziro.
Kana iwe uchida kuziva zvese nezve iyi yazvino maitiro tattoo, muchinyorwa chino tichapindura mibvunzo mishoma. Sayonara mwana!
1 Ndeapi biomechanical tattoos akafanana?
2 Chii chakafuridzirwa?
3 Ndeupi akanakisa biomechanical tattoo mugadziri akafanana?
4 Aya matatoo anotaridzika sei zvirinani?
Ndeapi biomechanical tattoos akafanana?
MaTatoo eiyi dhiraivha ari kurova kwazvo, kubvira Ivo vanozivikanwa nekugadzira chaiyo chaiyo yekunyepedzera: kunyepedzera kuti mukati memunhu nyora akagadzirwa netambo nesimbi. Kubva pane ichi chirevo, zvimwe zvese zvinongogumira nekufunga kwako uye neako weako tattoo muoni.
Biomechanical dhizaina matatoo achangobva kuitika. Rimwe remabasa akakurisa ndeye firimu Alien, Iyo ine dhizaini nemhizha HR Giger, ichibatanidza vanhu nemuchina musanganiswa unoputika.
Ndeupi akanakisa biomechanical tattoo mugadziri akafanana?
Paunenge uchitsvaga tattoo muoni kuti uite yako biomechanical hope, zvakakosha kuti iwe usarudze mumwe munhu ane ruzivo mune aya marudzi ematato. Biomechanics yakavakirwa pane kwechokwadi kugadzira iko kunyepedzera kwemubatanidzwa pakati pevanhu nemuchina, nawo iwe uchazoda mumwe munhu akanyatsotsanangurwa, ndiani anokwanisa mumvuri uye kupenda zvakatsetseka kupa mhedzisiro yekuti muchina iri chikamu chako zvakafanana.
Aya matatoo anotaridzika sei zvirinani?
Nyasha dzerudzi urwu rwematatoo kuziva nzira yekufambisa kunyepedzera kuti munhu anoipfeka ihafu muchina, hafu munhu. Kune izvi, iyo biomechanical chimiro zvidimbu zvinoratidzirwa nekuve yakakura kwazvo. Chii chimwe, Ivo vanowanzo tora mukana nenzvimbo nemajoini (sebendekete kana magokora) uye vane chimiro chaichoicho kuratidza iko kunyepa zvakanyanya.
Biomechanical tattoos anotyisa. Tiudze kana iwe uine kana kana iwe uchida mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Biomechanical nyora, hafu yenyama hafu muchina
Harry Potter zviratidzo, chete kune vateveri vazhinji
Joker, inozivikanwa kwazvo villain tattoo